वाह ! जिन्दगी ती युवा किशोर छँदा स्मृति लेख
पानीको फोहराले नगलेकी सुबानी
मलाई पहिल्यैदेखि देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, नेपालको परिवेश राम्रोसँग बुझेकी थिइनँ । अहिले परिवेश बुझ्न र त्यससँग भिज्न पाएँ । अब म पछि हट्दिनँ ।
कृष्ण आचार्यजेष्ठ ३०, २०७७
जक्सन न्यूरोड : चार दशकदेखिका ‘यार’
मासु र रक्सी यारहरूको प्रमुख रोजाइ हुन्थ्यो र निकै सस्ता खानेकुरा । यारहरूमध्येका एक सुवेदी भन्छन्, ‘त्यतिबेला सेक्सन अफिसरको तलब करिब ३ सय थियो । एक पटक बसेर रक्सी र मासु मज्जाले खाँदा ८ रुपैयाँले ४ जनालाई पुग्थ्यो ।
कृष्ण आचार्यजेष्ठ २८, २०७७
रियल हिरो अरुणको रेस्क्यु कथा
सुत्केरी महिलाको शवलाई चकलेट र्‍यापिङ्ग गरेर पशुपती आर्यघाट पुर्‍याए । चुनौतीपूर्ण कामको फ्रन्टलाइनमा खटिएका अरुण र राजेश नेपाली सेनाको वीर दल गणले व्यवस्थापन गरेको आइसोलेसन कक्षबाट पीसीआरको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पुनःकाममा फर्केका छन् ।
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठजेष्ठ २८, २०७७
‘लुरे’को सर्प समाउने कला
नाम लुरे भएर के भो त ? धेरै मानिसका लागि कल्पनाबाहिरको कुरा उनी गर्छन् । अहिले पनि उनी दिनदिनै सर्पको उद्धारमा व्यस्त रहन्छन् । हुनत सर्पको संरक्षणमा उनी बच्चादेखिनै आकर्षित भएका हुन् ।
राजाराम पौडेलजेष्ठ २४, २०७७
नारायण रायमाझी : लडाइँ र लाहुरका गायक
परदेशीका पीडामा आधारित गीतले सफलता पाएपछि उनलाई यथार्थपरक गीत सिर्जना गर्नेतिरै मन जान थाल्यो,अहिलेसम्मका गीतमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी परदेशीकै पीडामा आधारित गीत भएको उनी सुनाउँछन्
महेश तिमल्सिनाजेष्ठ २०, २०७७
जनक तिमिल्सिनाजेष्ठ १२, २०७७
भामको भिन्दै बाटो
देशभित्रैको त्यही दुर्गम–देशबाट आएर मीन भामले देशबाहिरको दूरदेशसम्म आफ्नो परिचय विस्तार गरिसकेका छन् । पाँच वर्षअघि भामले निर्देशन गरेको ‘कालो पोथी’ सिनेमाले उनको परिचयलाई मात्रै होइन, नेपाली सिनेमालाई पनि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा चिनायो । यो सफलयात्राको पूर्वकथामा भामले कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्म तय गरेको संघर्षपूर्ण बाटो छ, जो कम रोचक र कम प्रेरणादायी छैन ।
अनिल यादवजेष्ठ ७, २०७७
जनक तिमिल्सिनाजेष्ठ ५, २०७७